Forum serasera malagasy Momban'ny Ody - Dinika forum.serasera.org
Fitohizan'ny hafatra : Momban'ny Ody
heirzo - 28/12/2012 10:45
Lasa ny eritreritro androany noho ny resaka henoko tetsy tsy teroa ka tonga ato antsaiko ity fanontaniana ity hoe fa tena mandaitra tokoa ve ny "ODY" e ? Izaho manokana aloha dia tsy misalasala ny milaza fa misy tokoa ny atao hoe "ody gasy", misy koa tsy gasy fa ody inoan’ny olona tsy gasyâ€¦Maro ny olona no mampiasa azy io sy ny miantehitra amin’ny heriny. Fa moa ve tena mandaitra tokoa izy io sa manakory? Matetika fandré ny hoe rehefa manao baolina hono dia misy manao fanafody dia ny ekipa andaniny tsy mahadaka baolina fa lasa toy ny vato ilay izy. Na koa ny tongotra tsy mahavita mihazakazaka. Tsy eto Dago ihany io resaka "ody" io no mitranga fa be mpitantara koa any amin’ireny firenena iray kontinanta (Afrika) amintsika ireny. Dia ny mahagaga anefa: maninona no tsy mbola nisy firenena afrikana mpanao "ody" na iray akory aza ka nahazo ny tompon-daka eran-tany. Fa maninona no tsy lasa vato ny baolina rehefa mifanandrina amin’ireo firenena hafa isika? Makaiza daholo ireo mpanao ody malaza no tsy mba atao izay hahazoantsika ny «coupe du monde?» Tokony mba rehefa dakain’i Ronaldinho na ry Drogba sy ry Kakà na ry Zidane ohatra ny baolina dia lasa vato dia mandringa izy dia resintsika ny brézilianina, na ny Frantsay na ny Ivoirien !!!!!
Mitovitovy amin’io koa ny resaka «ody fitia» sy ny sisa. Toa hoe na olona tsy tianao izao aza hono dia lasa miraikiraiky mihitsy ianao ka manaraka tsy fidiny. Fa ny zavatra mahagaga ahy dia tsy misy vazaha azon’izy ity mihitsy. Dia hoy ny sasany hoe satria izy tsy mino kouh, ka raha tsy mino anie izany dia tsy mandaitra ny zavatra e. Dia aiza ihany ary izany no tena fipetrany. Dia hoy indray ny sasany hoe tsy mandaitra hono ny ody raha vao entina miampita (ranomasina). Fa ahoana koa ary izany, fa hery miafina ve ilay izy sa hery manakory no voafetra e?
Izaho mino fa misy zavatra tokony hojerena akaiky ao fa mety isika no resin’ny tahotra dia andairan’izao antsanga tsy aman’orana rehetra izao. Efa voadona isika «psychologiquement» dia tsy afa-manohitra intsony fa manaraka ho azy. Ity misy ohatra sady marina hanaporofoako ny tsy fandairany. Nisy olona teo amin'ny 23 teo ho eo izahay no niara-mipetraka. Ny iray taminay ireo dia niseho ho mafy tsy marary mihitsy ka nifanaraka ny ambiny fa izay mahita azy mandritra ny andro dia hiteny hoe: «ary toa hafahafa ny fahitàko anao izany, marary angaha ianao?». Dia nataon’izy ireo tokoa izany. Nandà mafy ilay ranamana raha mbola olona roa na telo monja no nanontany azy, fa rehefa nanomboka nihoatra ny folo ny nilaza fa toa mahita azy hoe marary dia nanomboka «troblé» izy ka nahatsapa tazo tampotampoka nanenika ny tenany tsikelikely. Tamin’ny farany hono rehefa tapitra ny 22 lahy nilaza fa mahita azy ho marary daholo dia narary saika maty tokoa ilay ranamana. Mino aho fa toy izany no mitranga amin’itony resaka "ody" itony raha toa ka izay tsy mino tsy andairany. Fa raha ny poizina toy ny asidra dia mahafaty na mino ianao na tsia. Ny zavatra tsikaritra raha sendra mandeha irery hariva amin’ny lalana mangina ny olona iray ka mifanena amin’ny voron-dolo dia mipararetra ny mipararetra avy hatrany ary na ny tongotro aza mila tsy hozakany intsony satria ny rehetra dia milaza fa voron’ny mpamosavy izy ireny. Vao maheno ny feony ny olona dia malemy satria ny mpamosavy no ao an-doha avy hatrany ka efa toy ny hoe voasambony ireny ilay olona, nefa raha vorona hafa toy fody na voromailala no re dia matoky tena toy ny misy namana izy. Fehiny: toa tsy te-hino intsony aho hoe mandaitra ny odyâ€¦mbola fisaintsainana miainga amin’ny zava-misy fotsiny aza izay, fa mbola aiza ho aiza ny tokony hiainantsika amim-pitokisana tanteraka raha ataontsika izay haharesy lahatra antsika hoe ireny rehetra ireny zava-boaary daholo ka inona no ho vitany raha miantehitra amin’ilay Mpahary (Andriamanitra) azy ireny isika. Mivoaka matetika ny vavantsika io teny io fa moa ve inoantsika tokoa fa vitany ny zava-drehetra? Noho izany "TSY MANDAITRA NY ODY" amiko
jobiely - 21/02/2013 15:02
Tena misy ny ody ary mandaitra raha toa ianao ka kely finoana an' Andriamanitra. Ireny vorondolo ireny koa dia vorona tahaka ny vorona rehetra iany saingy noho izy mivoaka amin'ny alina dia ampiasain'ny olona ( oh: mpamosavy) amin'ny zavatra ratsy ka izay no maha lasa atahoran'ny olona azy. Ny ody koa dia misy hery miafina avy amin'ny devoly fa tsy hoe "naturel" akory. Ireny zavatra rehetra ampiasain'ny mpilalao ody ireny ( oh: vovon- javatra, tapa- kazo...) dia samy avy amin'ny zavatra nataon' Andriamanitra daholo fa ny devoly no mamadika azy ho ampiasaina amin'ny zavatra ratsy. Ny mpilalao ody manko dia manao fati- drà amin'ny devoly mihitsy. Fehiny, Andriamanitra irery ihany no maharo amin'ny asan'ny devoly, ody = asan'ny devoly, noho izany, mitoera eo ambany elatr' Andriamanitra mba tsy handairan' izany ody ody zany. Vavaka sy fanoloran- tena amin'i Jeso Tompo irery ihany no lakile raha te ho voaaro.